Pasina = Zvimwe | Martech Zone
Pasina = Zvimwe
Chitatu, Nyamavhuvhu 10, 2005 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Ndanga ndichida kuteedzera yangu Vhura = Kukura tumira kwechinguva. Inotsanangurwa mune iyo posvo mukana wekuti ubudirire kana vanhu vakatarisisa maitiro avo mhinduro dzinogona kubatanidzwa nemamwe mhinduro. Iko kune parutivi divi kune izvi, uye ndezve makambani kudzikamisa mashandiro emhinduro dzavo kune musimboti wemashandisirwo avanoshandiswa. Kuwedzera plethora yezvigadzirwa, masevhisi, uye maficha anogona kuve nenjodzi.
Mapurogiramu vanozvidaidza 'zvinokambaira'.
'Kutamba' ndiyo husiku hweanogadzira ese. Zvinoitika kana chirongwa chakasimba chebudiriro chisina kuchengetedzwa nekutevedzwa. Zvimiro zvinopfuurira ku zvinopinda mukati kudzamara chirongwa chave kure kudzora zvekuti hachizombopedziswa. Kana zvakatonyanya, inopera uye iine huwandu husingakundike hwembugs.
Ini ndaizoendesa kuti makambani, uye zvigadzirwa zvavo nemasevhisi anogona zvakare kutambura ne 'zvinokambaira'. Nekusadzora kambani yako uye zvigadzirwa uye masevhisi ebhizimusi rako repamoyo, unotanga kudzingirira muraraungu, uchifunga kuti pane bhuru rinofanira kuve pano kana apo. Nekudaro, iwe unoregeredza kuona kukuvara kwazvinoita pane rako bhizinesi tarisiro, tarisiro yevashandi vako uye ruzivo, pamwe neyakawedzera strain iyo inoisa mukugadzirwa, tsigiro, kuendesa, nezvimwe.
Chero iwe paunofunga kutarisa zvimwe zvigadzirwa, masevhisi, kana maficha, tarisa kana paine kambani kunze uko yatovapa sechikamu chehwaro hwebhizimusi ravo. Unogona kuzviita zvirinani kupfuura ivo? Ko kambani yako inogona kutsigira izvo uye kuramba ichitsigira hunyanzvi mukati mako? Vashandi vako vanozoda kuchitsigira here?
Mukupedzisira, kudzingirira muraraungu kunogona kungokupwanya.
Tags: kuvandudza kwesarudzozvinokambairachinzvimbo chinokambairazvinhuzvishomanyore
Chete Zvakarairwa naChiremba?